KOMPREXX - Quanzhou Omi Dharka Co., Ltd.
QIIMEYN KU SAABSAN DHAQANKA DHAQANKA
Saraawiishayada riixa iyo xirashada isboortiga ayaa ah xalka ugu fiican dhammaan howlaha isboortiga iyo jimicsiga. Isku-dhafka, jilicsanaanta jilicsan ayaa taageero siisa dhammaan qeybta hoose ee jirkaaga. Markaad xiraneyso lebbiskayaga ordaya cidhiidhiga, waxay u egtahay inaad haysato mashiinka wareegga ee bowdyahaaga iyo murgacashada taasoo ku siin doonta waxqabad firfircoon inta lagu jiro jimicsigaaga!
Xakamaynta cadaadiska ayaa xaddidaya dhaqdhaqaaqa muruqyada xad-dhaafka ah ee dhacaya inta lagu jiro orodka, fidinta, baaskiil wadista ama yoga iyadoo la ilaalinayo tamarta si ay kuu siiso waxqabad wanaagsan iyo adkeysi dheeraad ah. Iyagu waa leggings riixo kama dambaysta ah ama surwaal adag. Wax dhib ah maleh jimicsiga aad sameysid, qalabkayaga riixo ayaa kaa caawin doona inaad noqoto kan ugu fiican!
XANUUN XANUUN, DHAQAALAHA SOO KOOBKA DEGDEGA
Isticmaalka surwaal riixitaanku wuxuu yareeyaa xanuunka inta lagu jiro iyo kadib dhaqdhaqaaqyada jirka ee daran, taasoo kuu oggolaanaysa inaad jimicsi dheer sameyso Wareejinta dhiigga ee ka soo hagaagaya surwaalkeena wax lagu duubo waxay xaqiijineysaa soo kabasho dhakhso leh waxayna ka hortageysaa daalka.
DHAQANKA SHAQAALAHA, DHAQANKA RAAXADA OO Kordhay
Dharka 4-dhinac ah ee la kala bixin karo ayaa si taxaddar leh loo xushay si loo hubiyo raaxada ugu badan - cuncun ama cuncun. Dharka ayaa sidoo kale dhaqso u dhidid dhidid, wuxuu maqaarkaaga ka dhigaa mid qallalan oo raaxo leh. Dharkeena jir dhiska ayaa fududahay in la nadiifiyo waxayna haysaa qaabkeeda xitaa dhawr jeer kadib. Iyo, jimicsiga jirka oo khafiifa wuxuu ku siinayaa muuqaal sasabasho ah waana mid lagu soo dhoweeyay dharka qof walbo.